Nuglaanta ayaa laga helay kamaradaha Mac laakiin Apple hore ayey u ogeyd | waxaan ka imid mac
Nuglaanta ayaa laga helay kamaradaha Mac laakiin Apple ayaa horeba u ogaa
Mid ka mid ah astaamaha sida dhabta ah loo isticmaalay labadii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii uu Mac ahaa kamarada internetka. Kulamo badan oo khadka ah, waa shayga ay tahay in had iyo jeer la heli karo oo diyaar u ah u adeegida. Qalab had iyo jeer ay ku hareeraysan yihiin dhibaatooyinka amniga oo siiya isticmaalayaasha cabsida ugu badan haddii la dhaco. Dhab ahaantii, Apple waxay heshay nuglaanta saamaysay kamaradaha Webka mahadsanid Ryan Pickren. Ardaygan barta internet ka ayaa Apple tusay sida loo jabsado webcam-yadooda Mac-yada.
Ardayga barta internetka ee Ryan Pickren ayaa Apple tusiyay sida loo jabsado webcams kooda Mac-yada iyo sida looga tago aaladaha u furan kuwa jabsada sidoo kale. Sidaa darteed, garaadkani waxa uu ku guulaystey in shirkadda Maraykanka ah ay siiso lacagtaas boqol kun oo dollar, lacagta ugu badan ilaa hadda. Thanks to barnaamijka abaal-marinta cayayaanka ee shirkadda.
Nuglaanta kaamirada cusubi waxay khusaysay dhibaatooyin dhawr ah Safari e iCloud. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka Apple ayaa mar hore xalliyay. Nuglaanta waxay ka dhigan tahay in weerar laga soo qaadi karo degel xaasidnimo leh iyadoo la adeegsanayo cilladaha softiweerka. Weerarku wuxuu si buuxda u heli doonaa dhammaan akoonnada ku salaysan shabakadda, laga bilaabo iCloud ilaa PayPal, iyo sidoo kale oggolaanshaha isticmaalka makarafoonka, kamarada, iyo wadaagga shaashadda. Hadda, waa in xisaabta lagu daro in haddii kamaradda Shabakadda la isticmaali lahaa, iftiinka cagaarka ah waa inuu shidnaa, si markaas isticmaaluhu uu u ogaan lahaa isticmaalkiisa aan loogu talagelin.
Markaad arrintan ku ogaatay barnaamijkaaga gaarka ah, waa macquul in isla sidaas oo kale hore loo xaliyay laakiin dhibaatadu waxay tahay in shirkadu aysan cayimin in si firfircoon looga faa'iidaysanayay ama ay si fudud ugu jirtay shaybaarka. Waxa cad in abaal-marintii la abaalmariyey ay ahayd middii ugu sarraysay ee taariikhda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Nuglaanta ayaa laga helay kamaradaha Mac laakiin Apple ayaa horeba u ogaa
Waa maxay iPadka ugu fiican ee aad u qaadan karto kulliyadda